Myanmar Defence Weapons: ကမ္ဘာစစ်အတွက် ဘန်ကာများ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ မိမိတို့ နှင့် အကျင့်စရိုက်တူရာ များစုပေါင်းနေထိုင်ကြခြင်းဖြင့် နိုင်ငံများ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ လူ့အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ၊ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခု အဆင်မပြေ ဖြစ်လာရာမှ စစ်ပွဲကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၈ ရာစု ရှေ့ပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော စစ်ပွဲများတွင် မိမိဘက်မှ အကျအဆုံးနည်းနည်းနှင့် စစ်ပွဲကို အောင်နိုင်ရန် အတွက် အမျိုးမျိုး ကြံဆလာခဲ့ကြလေသည် ။ နောင်တွင် စစ်ပွဲတွင်တိုက်ခိုက်နေသော စစ်သည်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက် ရုံမျှမက နောက်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လူထုကိုပါ တိုက်ခိုက်၍ ထောက်ပံ့မှုလမ်းကြောင်း ဖြတ်တောက်မှုများ နောက်ပိုင်းနယ်မြေများကို Fail State ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ တိုက်ခိုက်လာကြပါသည်။
၁၉ ရာစု အစပိုင်းမှစ၍ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာသော အခြေခံသိပ္ပံ ပညာရပ်များဖြစ်သော ဓာတုဗေဒ ၊ ရူပဗေဒ နှင့် သင်္ချာ ပညာရပ်များသည် စစ်ပွဲ၏ အယူဝါဒအပေါ် များစွာ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည် ။ ဤသို့ဖြင့် ၂၀ ရာစုနှင့် ယခု ၂၁ ရာစုတို့တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ဆန်းသစ်သော လက်နက်များ ၊ စစ်ဥပဒေသများသည် လူသားတို့အပေါ်တွင် သာမက ကမ္ဘာကြီး၏ ဂေဟစနစ် ရေထု လေထု မြေထု တို့အား နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည်အထိ ပျက်စီးသွားနိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်ကြလေသည်။
ပထမ ကမ္ဘာစစ်တွင် ပါဝင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသော ဂျာမာန် နှင့် ဥရောပ မဟာမိတ်နိုင်ငံ များသည် တစ်ဖက် နှင့် တစ်ဖက် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အဖျက်စွမ်းအား ကြီးမားသော ဓါတုလက်နှက် များကို ကြီးမားစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးမှ လူသားမျိုးနွယ်များ အပေါ်တွင် ဓါတုလက်နှက် အသုံးပြုခြင်းသည် လွန်စွာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အပြုအမူ ဖြစ်သဖြင့် နောင်တွင် ဖြစ်ပွားသော စစ်ပွဲများတွင် လုံးဝ အသုံးမပြုရန် ဥပဒေများ ချမှတ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည် ။ သို့ရာတွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၊ အမေရိကန် ၊ ဂျာမနီ ၊ ပြင်သစ် ၊ အီတလီ တို့ သည်မိမိတို့ နိုင်င်များတွင် ဓါတုလက်နှက်များကို သုတေသနများ ပြုလုပ်၍ ပမာဏမြောက်များစွာ သိုလှောင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွားသောအခါ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပထမကမ္ဘာစစ် ကဲ့သို့ ဓါတုလက်နှက်များကို ပမာဏများပြားစွာ အသုံးမပြုသော်လည်း ဟစ်တလာ၏ ဂျူးလူမျိုးများ အပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွင် ဓါတုအဆိပ်ငွေ့များကို အဓိကထား၍ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ ဇာတ်သိမ်းမင်းသားဖြစ်သည့် ဓါတုလက်နှက်ထက် များစွာ အဖျက်စွမ်းအားကြီးမား သော နူကလိယျလက်နှက် သည် ၎င်း၏ ဖျက်စီးနိုင်စွမ်းကို ပြသ၍ပွဲထွက်လာခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် WMD စာရင်းတွင် အဓိကအားဖြင့်
( ၁ ) ဓာတုဗေဒ လက်နက်များ ( Chemical Weapons )
( ၂ ) ဇီဝဗေဒ လက်နက်များ ( Biological Weapons )
( ၃ ) နုကလီးယား လက်နက်များ (Nuclear Weapons)
အစရှိသဖြင့် အဓိက အုပ်စု ၃ ခုကိုမူတည်သတ်မှတ်၍ ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်း ၊ နိုင်ငံအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စစ်အေးကာလ အင်အားကြီး ပြိုင်ဘက်နှစ်နိုင်ငံ မှ ဦးဆောင်၍ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတွင် သိုလှောင်ထားသော Chemical Stockpiles များအားဖျက်စီးခြင်း ၊ စက်ရုံများအား ပိတ်ခြင်း ၊ ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ သို့ မရောင်းချရန် သဘောတူ ခြင်း အစရှိသဖြင့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြ ပါသည်။
သို့ရာတွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အီရန်-အီရတ်စစ်ပွဲ ( 1980 – 88 ) တွင် အီရတ်၏ ကာဒ့် လူမျိုးတို့အပေါ် လူမျိုးတုံးလုနီးနီး ဓါတုလက်နှက်များ အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ မြေအောက်ရထားတွင် Nerve Agent ( Sarin ) ကို အသုံးပြု ၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ( မတ် ၂၀ ၊ ၁၉၉၅ ) ၊ ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွင် အသုံးပြုနေကြခြင်း စသည့် အဖြစ်အပျက်များသည် ယနေ့ခေတ်၏ မလုံခြုံသော အခြေအနေများကို ထင်ဟပ်နေစေပါသည်။
ယနေ့အခါတွင် WMD များကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။
( ၁ ) ကမ္ဘာစစ်အတွက် သုတေသနပြု ပြင်ဆင်ခြင်း ( မိုးမပြို ပြိုခဲ့သည်ရှိလေသော် )
( ၂ ) သမာရိုးကျ စစ်လက်နက်များတွင် နုကလိယျ နှင့် ပြင်းထန်သော ဓာတုလက်နက်များ ၊ ဇိဝလက်နက်များ ထည့်သွင်းသုံးစွဲ ခြင်း ( နားလှည့်ပါးရိုက် )
( ၃ ) အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား များမှ သုံးစွဲ ခြင်း ( အဓိကအားဖြင့် ဓာတုလက်နက်များ )
ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထို WMDs များ၏ ဘေးမှ ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံများသည် မိမိတို့တတ်စွမ်းသည့် ဘက်မှဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိသော စစ်သည်များနှင့် လူတစ်ဦးချင်းဆီကို ကာကွယ်ပေးခြင်း ( Individual Protection Kit ) နှင့် ပြည်သူလူထုနှင့် အရေးကြီးနေရာများအား ( ဥပမာ ဆေးရုံ ၊ ရေအရင်းအမြစ် ၊ ရိက္ခာသိုလှောင်ရုံများ ) ကာကွယ်ပေးခြင်း ( Collective Protection ) များဟု အခြေခံအားဖြင့် ခွဲခြားထားပါသည် ။
ယခုစာပိုဒ် တွင် ပြည်သူလူထုအား ကာကွယ်ချင်း ဟူသော ( Collective Protection ) အပိုင်းအား အဓိကထား ဖော်ပြသွားပါမည်။ ထိုသို့ကာကွယ်ရာတွင် Shelter များ၏ အခန်း ကဏ္ဍများသည် အရေးကြီးပါသည် ။ ထို Shelter များကို အခြေခံအား ဖြင့် ဤကဲ့သို့ခွဲခြား နိုင်ပါသည် ။
၁ ။ Asylum ( Civil Defence Shelters ) ဟုခေါ်သော အခိုင်အမာကွန်ကရစ် ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Shelter များ ၊ WMDs အမျိုးအစားအားလုံးကိုခုခံ နိုင်ပြီး ၊ သီးခြားလေသန့်စင်စနစ် ၊ ဆေးဝါး အကူအညီ ၊ အိမ်သာစနစ် ၊ ရိက္ခာစနစ်များ ၊ စွမ်းအင်စနစ်များ ပါဝင်သော စံပြု shelter များဖြစ်သည်။
၂ ။ Anti radiation Shelters ဟုခေါ်သော နုကလိယျ ပေါက်ကွဲမှု ဇုံအတွင်း Radiation ကြောင့်ဖြစ်သော ဆိုးကျိုးများမှ ရှောင်လွဲ နိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားသော ယာယီခိုလှုံရန် နေရာများဖြစ်ပါသည် ။
၃ ။ Simple Shelters ဟုခေါ်သော စစ်ရေးနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကပ်ဘေးဆိုးများအတွင်း ကျားကန်ထားနိုင်ရန် ရိက္ခာ နှင့် အသုံးအဆောင်များအား သိုလှောင်ထားသော စတိုးများ ဖြစ်သည် ။
ထိုသုံး မျိုးထဲမှ Asylum အမျိုးအစားအား အကြမ်းဖျင်း ရေးသားသွားပါမည်။
Asylum ( Civil Defence Shelters )
Asylum များကို များသောအားဖြင့် အခိုင်အမာ အဆောက်အဦးများ၏ အောက်တွင် သော်လည်းကောင်း ၊ ရန်သူ၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှ ကင်းလွတ်နိုင်ခြေရှိသော နေရာများတွင် လည်းကောင်း တည်ဆောက် ထားရှိပါသည် ။ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှ စတင်တည်ဆောက်ချင်း မဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းနေသော အချိန်တွင် စနစ်တကျစီမံ ပြီးတည်ဆောက်ကြခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများမှ ၎င်းတို့၏ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ မဆုံးရှုံးစေရန်အတွက် စနစ်တကျ စီမံ၍ တည်ဆောက်ထားကြပါသည်။ ထိုသို့တည်ဆောက်ရာတွင် စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားချိန်အတွင်း ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသော အချိန်တွင်လဲ စီးပွားရေးအရ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်နိုင်သော သိုလှောင်ရုံများ အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားရှိပါသည် ။ ထို့အပြင် ၎င်းးတို့၏ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများတွင်လဲ အရေးပေါ်စီမံချက်တွင် ထည့်သွင်း ၍ စစ်မက်ဖြစ်ပွားချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည် ။
Asylum များကိုကြီးမားသော အဆောက်အဦးများ၏ အောက် ( ဥပမာ - ဆေးရုံကြီးများ ၊တက္ကသိုလ်များ ၊ ရုံးများ ၊ လေဆိပ် ၊ သင်္ဘောဆိပ် ၊ မိးသတ်ဌာန များ ၊ စစ်ရုံးကြီးများ၊ အထပ်မြင့်ထုထည်ကြီးမားသော လူနေအဆောက်အအုံများ ) အနည်းဆုံး အနက် ၂၀ မီတာ မှ ၃၀ မီတာ ၊ ၃၀ မီတာ နှင့် အထက် ဟူ၍ အဆောက်အဦး အမျိုးအစား ၊ ခိုနားမည့် လူဦးရေ ၊ အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ အပေါ် မူတည် ၍တည်ဆောက် ထားနိုင်သည်။
Asylum တစ်ခုတည်ဆောက် ရာ တွင် ပါဝင်သော အဓိကအချက်များ
( ၁ ) နံရံများ ၊ မျက်နှာကြက်များ တည်ဆောက်ချင်း ( Infrastructure )
( ၂ ) လေရှုစနစ် တည်ဆောက်ပေးချင်း ( Ventalation System )
( ၃ ) ရိက္ခာစီမံချင်း ( Food Supply )
( ၄ ) ရေ အရင်းအမြစ် ( Water Supply )
( ၅ ) ဆေးဝါး အကူအညီ ( First Aids Measure and Medical Support )
( ၆ ) အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်ချင်း ( Sewage System )
( ၇ ) စွမ်းအင်အထောက်အပံ့ ( Energy Supply )
( ၈ ) ဆက်သွယ်ရေး ( Communication )
( ၉ ) အရေးပေါ်အခြေအနေ အတွက်စီမံချက် ( Emergency Plan and Fire Fighting ) စသည်တို့ကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းတွက်ချက် တည်ဆောက်ကြရပါသည်။
၁ ။ နံရံများ ၊ မျက်နှာကြက် များတည်ဆောက်ချင်း ( Infrastructure )
Asylum များတည်ဆောက် ရာတွင် အမျိုးမျိုးသော ဓာတုအဆိပ်များ ၊ ဇီဝလက်ပိုးမွှားများ နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ခိုင်မာတောင့်တင်းပြီး စေ့စပ်သေချာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကွန်ကရစ်ကို အဓိကအသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည် ထိုးဖောက်ခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အနည်းဆုံး ထု ၆စင်တီမီတာ ( ၂လက်မခွဲ ) ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး၎င်းအားပံ့ပိုးရန် ခဲလွှာ(Lead layer) ၁စင်တီမီတာ ဖြင့်ဖုံးအုပ်ကာ တည်ဆောက်ရပါသည်။ ထို့အပြင် အဆောက်ဦး၏အောက်တွင် မဟုတ်ပဲ သီးခြားတည်ရှိနေပါက ဖုံးကွယ်မှုနှင့် အချို့သော ဓာတုဓာတ်ငွေ့တို့၏ သက်ရောက်မှု လျော့ကျစေရန် အတွက် Shelter ၏ အမိုးအဖြစ် မြေကြီးထု ၁၅၀စင်တီမီတာ(၅ပေခန့်) အနည်းဆုံး လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ပြင် အတွင်းတွင် အခန်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ပိုက်လိုင်းများ ၊ ပြင်ပနှင့်ဆက်စပ်မှု ရှိနေသော စနစ် များလုံခြုံမှု ရှိစေရေး ၊ အခန်းတွင်း အပူချိန်မျှတရေးတို့ကိုလဲ ထည့်သွင်းတွက်ချက် တည်ဆောက်ရပါသည်။
၂ ။ လေရှုစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း ( Ventalation System )
လေရှု စနစ်သည် Shelter ၏ အရေးအကြီးဆုံးနှင့် အဓိက ကျဆုံး စနစ်ဖြစ် သည် ။ ယေဘူယျ အားဖြင့် လေရှု စနစ် အား အမျိုးအစား ၂ မျိုးခွဲခြားထားသည် ။ ပြင်ပ မှ လေကို စုပ်ယူ၍ ပြန်လည်သန့်စင်ပြီး အခန်းများသို့ ပိုက်လိုင်းအတွင်းမှ ပြန်လည် ပို့လွှတ်ပေးသော ( Filtration System ) နှင့် ဓာတုဓာတ်ပြုမှုဖြင့် Oxygen ကိုထုတ်လွှတ်ပေးသော ( Generating Syetem ) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်သန့်စင်သည့်စနစ်သည် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူပြီး ၎င်းစနစ် လည်ပတ်ရန်အတွက် စွမ်းအင်ကုန်ကျမှု သက်သာပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းစနစ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ Filterတွင် တပ်ဆင်ထားသော လေထုသန့်စင်သည့် Chemical များ ၏လုပ်နိုင်စွမ်းအား ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှုန်းနှင့် ခိုနားသော လူဦးရေတို့ အပေါ်တွင် များစွာမူတည်နေပါသည်။ ဓာတုဓာတ်ပြုမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်ပေးသော နည်းလမ်းတွင်မူ ပြင်ပလေထု၏ ညစ်ညမ်းမှုအား ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် မလိုပေ ။
လေရှုစနစ်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးသော စနစ်များသည် အောက်စီဂျင်ထုတ်ပေးရန် သာမက အခန်းတွင်း စိုထိုင်းစကို ထိန်းညှိပေးခြင်း ၊ အပူချိန်ထိန်းညှိပေးခြင်းနှင့် အနံ့ဆိုးများ ပြင်ပသို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ခြင်း စသည်တို့ကိုပါ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပါသည် ။ ထို့အပြင် အရေးကြီးသောအချက်မှာ Shelter သို့ဝင်သော ဝင်ပေါက်များနှင့် အခန်းတွင်းတွင် လေထုဖိအားအား ပြင်ပလေထုဖိအားထက်မြင့်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်များ ၊ ပိုက်လိုင်းများ၏ ဆက်စပ်နေရာများ ၊ နံရံတွင်ရှိနေနိုင်သော အက်ကြောင်းများမှ ပြင်ပလေများ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းအား ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
၃ ။ ရိက္ခာ စနစ်များ ( Food Supply )
စစ်ပွဲကာလ အတွင်း Shelters များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရိက္ခာစို/ ခြောက်များအား သင့်တင့်သလို ဒေသနှင့်လူဦးရေအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်စုဆောင်း ရပါသည်။ အခန်းတွင်းတွင် မီးအသုံးပြု ချက်ပြုတ်ရန် မသင့်တော်သောကြောင့် ရိက္ခာခြောက်များအား စားသုံးခြင်း ၊ စကေးဖြင့် စားသုံးခြင်း ၊ စနစ်ဖြင့်စားသုံးခြင်း စသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄ ။ ရေအရင်းအမြစ် ( Water Supply )
ရေအရင်းအမြစ်အား ယေဘူယျအားဖြင့် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသော အရပ်မှ ပိုက်လိုင်းဖြင့် ရယူသုံးစွဲ ခြင်း၊ မြို့၏အရေးပေါ် ရေပေးဝေမှု စနစ်များမှရယူခြင်း ၊ ကြိုတင်စုဆောင်းထားသော နေရာများမှ သုံးဆွဲခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ကြိုတင်စုဆောင်းထားရာ နေရာများမှ အသုံးပြုကြသည်က များပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်ပွဲကာလ အတွင်းတွင် WMDs များ သုံးပါက ရေအရင်းအမြစ်များသည် စစ်ပွဲ၏ အဓိကပစ်မှတ်များ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
၅ ။ စွမ်းအင်စနစ် ( Energy Supply )
စွမ်းအင်စနစ်တွင် အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် အချက်မှာ ၎င်းစွမ်းအင်စနစ်၏ လောင်စာ သုံးစွဲမှုစနစ် ဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲကာလတွင် လောင်စာစနစ်များ၏ ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၊ သိုလှောင်ရေးစနစ်များ ဖျက်ဆီးပြတ်တောက်ခံရ ခြင်းများ ကြုံတွေ့နိုင်ရခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ထို့အပြင် စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုစနစ်မှ ထွက်ရှိလာသော လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် Shelter ၏ လေရှုစနစ်တို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကိုလဲ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ထားသင့် ပါသည် ။ အသံလုံခြုံမှုစနစ် ၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးစနစ် ၊ အသုံးပြုရန် လွယ်ကူမှု စသည်တို့ကလဲ အရေးပါသော အချက်များပင် ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် Shelter များတွင် ဘထ္ထရီအိုးများနှင့် ရေရှည်အတွက် ဒီဇယ်လောင်စာသုံး မီးစက်များကို အလှည့်ကျ အသုံးပြုကြသည်။ လိုအပ်ပါက လူအားဖြင့် လျပ်စစ်ထုတ်ပေးနိုင်သော ဘထ္ထရီအားဖြည့်စနစ်များကိုပါ သိုလှောင်ထားရှိကြည်။ ဒီဇယ်သုံး စွမ်းအင်ပေးစနစ်သည် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ရရှိရန် လောင်စာသုံးစွဲရမှု လျော့နည်းခြင်း၊ ဒီဇယ်သည် ဓာတ်ဆီနှင့်ယှဉ်ပါက မီးလောင်မှုကို အတိုင်းအတာ တခုအထိ အားပေးမှုလျော့နည်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းသိုလှောင်ရန် လွယ်ကူခြင်း စသည့် တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အားနည်းချက်မှာ အသံလုံခြုံမှု အားနည်းခြင်း ၊ စက်ပျက်စီးပါက ပြုပြင်ရန် အနည်းငယ်ခက်ခဲခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အပြစ်နဲ့အကျိုး ချိန်ဆပါက အကောင်းဆုံးစနစ် ဖြစ်သောကြောင့် Shelter များ၏ စွမ်းအင်ပေးစနစ်တွင် ပြင်ပ လျပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစနစ်များ(ရေအား၊ နူကလျိယ ကဲ့သို့ ပုံမှန်ဓါတ်အားပေးစနစ်များ) ကို အသုံးမပြုနိုင်သော အချိန်တွင် ဒီဇယ်လောင်စာသုံး စနစ်ကိုသာ ရွေးချယ်ကြလေ့ရှိပါသည်။
၆ ။ ဆေးဝါးအကူအညီ ( Medical Aids)
Asylum များတွင် သီးခြား ဆေးအကူအညီပေးရေး ယူနစ်များ ဖွဲ့စည်းထားပါသည် ။ Shelter ထဲတွင် ခိုနားမည့် လူများ၏ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ရန် သာမက စစ်ပွဲကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရလာသော လူများကိုပါ ကုသနိုင်ရန် လုံလောက်သော လူအင်အား၊ ပစ္စည်းအင်အားတို့ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။
ထို့အပြင် ဆေးအကာအကွယ်ပေးရေး ထမ်းဆောင်ရသော သူနာပြုများ၊ ဆရာဝန်များသည်လည်း ဓာတုဗေဒ လက်နက်များ ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့် လူနာများကို ကိုင်တွယ်ရနိုင်သည့် အတွက်၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေး အတွက် Personal Protective Equipment များကို ဝတ်ဆင် အသုံးပြုကုသရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းစနစ်များကို ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရန် ကြိုတင်လေ့ကျင့် ထားကြရပါသည်။ Military Medical Personnel တို့၏ လေ့ကျင်မှု ကျွမ်းကျင်မှုကို အဓိက လိုအပ်သော နေရာဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားများ ၊ သမာရိုးကျမဟုတ်သော လက်နက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါများ ၊ ကုသမှု ကန့်သတ်ချက်များ ၊ အခြေအနေ ကန့်သတ်ချက်များကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိနေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရပါသည်။ ထို့အပြင် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ခေတ်မီမှုနှင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှုတို့ အတွက်လည်း ကြိုတင်စီစဉ်ထားရှိကြရပါသည်။ နေရာယူမှု ကျဉ်းကျဉ်း နှင့် ထိရောက်သော ကုသမှု ကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ပြင်ဆင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်။
၇ ။ ဆက်သွယ်ရေး ( Communication )
Shelter များတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ရန်၊ Shelter အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် သိးသန့် ကြိုးဖြင့် ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေး စက်များအား ထားရှိပါသည် ။ ထို့အပြင် ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကို လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်၍ တပ်ဆင်ထားရှိ ကြပါသည်။
၁ ။ နားခိုသူများ နေထိုင်ရန် ၆ ။ အညစ်အကြေးများစွန့်ပစ်ချင်း
၂ ။ ရုံးခန်းများ ၇ ။ စတိုးခန်း ( Raw Materials )
၃ ။ ဆေးခန်း ၈ ။ စတိုးခန်း ( Food, Water and Medical )
၄ ။ လေရှုစနစ် ၉ ။ ဝင်ပေါက် အခန်း
၅ ။ စွမ်းအင်စနစ် ၁၀ ။ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် အခန်း
၈ ။ စီမံခန့်ခွဲမှု ( Administration )
Shelter များတွင် နားခိုစဉ်ကာလသည် မည်မျှကြာမြင့်မည်၊ မည်မျှအဆင်ပြေမည်ကို မည်သူမှ ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ထိုသို့နားခိုကြရာတွင် မိမိ၏ အိမ်တွင်နေသကဲ့သို့ နေထိုင်ရှင်သန်၍ရမည် မဟုတ်ပေ။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဖြစ်သောကြောင့် ဤနေရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှငိ့ စီမံခန့်ခွဲမှု က အရေးကြီးပါသည်။ နားခိုသူများကြားတွင် အဆင်ပြေချော့မွေ့စေရန် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုနှင့် ပဋိပက္ခ ကိုလျှင်မြန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် နေ့စဉ်အချိန်ဇယားဖြင့် စားသောက်နေထိုင်ခြင်း ၊ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အင်အားကို ကုန်ဆုံးစေသော အကျိုးမဲ့ စကားဝိုင်းစုဖွဲ့ပြောဆိုခြင်း ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်း စသည်တို့ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြပ်မတ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည် ။ ထို့အပြင် နားခိုသူများတွင် ရောနှောပါဝင်လာနိုင်သည့် ရန်သူများကိုလည်း စောင့်ကြည့် စိစစ်ထားနိုင်ရန် လိုအပ် ပါသည် ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Asylum ဟုခေါ်သော Fallout Shelter များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် လွန်စွာကျယ်ပြန့် ပါသည် ။ ၎င်းတို့ကို တည်ဆောက်ခြင်း ၊ စွမ်းအားပြည့် လည်ပတ်နိုင်ရန် တို့သည် State Level Management များဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နိုင်ငံ ကြုံတွေ့လာ ရနိုင်သည့် ရန်သူ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိသော လက်နက်များ၏ အဖျက်စွမ်းအား၊ ဝေဟင် ရေပြင် မြေပြင်တို့အား မိမိနှင့်ရန်သူတို့ ၏ စိုးမိုးထားနိုင်မှု ၊ စစ်မြေပြင်၏အခြေအနေ ( မိမိပိုင်နက် ဧရိယာ မှာစစ်ပွဲ အဖြစ်ခံမလား၊ ရန်သူ့ ဧရိယာမှာ စစ်တိုက်မလား ) ၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ များ၏အဆင့်အတန်း များ ၊ မိမိနိုင်ငံပြည်သူ တို့၏ အခြေအနေကို မှန်ကန်စွာတွက်ချက်နိုင်မှု ၊ ပြည်သူတို့၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ၊ ကြိုတင်မှန်းဆ လေ့ကျင့်ထားနိုင်မှု၊ ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားနိုင်မှု အစရှိသည်တို့ အဓိက လိုအပ်ပါသည် ။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၎င်း Shelter များအား အနိမ့်ဆုံးအဆင့် လူဦးရေ ၆၀၀ ၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ၆၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကြား နှင့် အမြင့်ဆုံး ၂၀၀၀ နှင့်အထက်အား အချိန်ကာလအားဖြင့် ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်မှသည် ၈ ပတ်အထိ ခံနိုင်ရည် ရှိအောင် ( မှတ်ချက် ရုရှားနိုင်ငံ၏ စံနှုန်းဖြစ်ပါသည် ) တည်ဆောက်ထားကြ ပါသည် ။ အထူးသဖြင့် ရုရှား ၊ တရုတ် ၊ အမေရိကန် နှင့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့သည် မြေအောက်တွင် စခန်း ဆောက်လုပ်ချင်း ( ခိုနား ရန်သာမက စစိပွဲဆင်နွှဲ နိုင်လောက်အောင်ပင် ကြီမားသော စခန်းများ ) တည်ဆောက်ရာ တွင် အလွန်အောင်မြင်နေသောနိုင်ငံ များဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လဲ မိမိတို့ ၏ နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးအတွက် မိမိတို့ ကြုံတွေလာနိုင်သည့် ရန်သူ ( Potential State Enemy ) နှင့် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော လက်နက်များ နှင့် နည်းဗျူဟာများ၊ သဘာဝဘေးအန္တာရယ်များကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာနေပြီး တန်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်၊ တုန့်ပြန်လှုပ်ရှားရန်၊ ကာကွယ်ရန် အခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊ နည်းပညာများ၊ လေ့ကျင့်မှုများ၊ ဆေးပညာတို့အား အဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေခြင်း ဖြင့် မိမိတို့ ၏ စစ်ရေးစွမ်းအား ၊ ကာကွယ်ရေး စွမ်းအားတို့အား စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်နေသင့် ပါသည်ဟု အကြံပြုရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။
(ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားပေးပို့ခဲ့သူ Dr-THRAX အား ကျနော်တို့ MDW အဖွဲ့သားများ အနေဖြင့် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ကျနော်တို့၏ မီဒီယာအပါအဝင် အခြားသော ဖိအားအခက်အခဲများကြောင့် တင်ဆက်မှုများ နှေးကွေးနေရခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ စာဖတ်သူများကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်ရင်း ပို့စ်အသစ်များအတွက် ကြိုးစားနေပါကြောင်းခင်ဗျား။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။)
Posted by Mg Han at 7:18 AM
Falcon August 10, 2014 at 11:40 PM
အတွေးသစ်တွေရစေတယ်ဗျာ..။ Mass Destructive Weapons များ ရဲ့... သက်ရောက်မှု ကို အမြဲထည့် တွက်ရတော့မှာ ပေါ့ဗျာ...။ ဥာဏ်နဲပြီး အစွန်း ရောက်သူများရဲ့ လက်ထဲ... ဒီလို လက်နက်တွေမရောက်ပါစေနဲ့.....
zaw khine August 11, 2014 at 2:27 AM
Aunglan Takon August 16, 2014 at 2:24 AM
ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို အဖျက်စွမ်းအားကြီးတယ့်လက်နက်တွေ ဘယ်သူ့မှာမှမရှိဈေင်ဘူးဗျာ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ။ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လဲကြီး ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်လဲကြီး သုံးလိုက်ရင်လဲ ရန်သူပင်ဖြစ်စေ လူဆိုတယ့်အသိလေးနဲ့ ထည့်စဉ်းစားလိုက်ရင် မသုံးရက်လောက်အောင် အဖျက်စွမ်းအားကြီးလက်နက်တွေ ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ မရှိစေချင်ဘူးဗျာ။ဒါပေမယ့်လဲရှိတယ့်နိုင်ငံတွေကရှိနေတော့လဲ အမိနိုင်ငံကြီးမှာလဲရှိစေချင်တာပေါ့။ပြည်သူတွေဘေးရန်ကင်းပါစေဗျာ။
John H Win October 6, 2014 at 11:48 AM
John H Win October 6, 2014 at 11:51 AM
Only one thing which is truly questionable is that whether these underground bunkers are actually protective and strategically useful in the ultimate situation ofatotal war in the current modern time. Actually those bunkers are dedicated foratotal war.
Threat perception and defining potential threats and enemies are necessarily considerable elements in formulatinganation’s war doctrine. First of all, it will need to guesstimate and calculate who and which country and what kind of threat will be the most potential enemy and potential threats of our nation? How much they can, and otherwise how and which way they can devastate our nation?
Offensive spirit and offensive capabilities are much more important foranation and must be first priority though it may need to construct suchaprotective shelter or defensive measures foranation’s strategic assets.
But these very deeply dug bunkers are no longerasaved heaven for civil defense, to some extent, probably more dangerous because of bunker busters and earth penetrators.
War fighting methods and defensive strategies are ever changing in times because innovative military technologies are changing and changing.
Underground bunkers and tunnels are mostly constructed in the time of cold war asalesson of WWII massive air raid. Though the origin went back to WW II, high precision bunker busters and earth penetrators with pin point accuracy are specially invented after the cold war.
GBU-28 BLU-113 penetrator can penetrate over 30meters (100 feet) of earth soil or 6.7 meters (22 feet) of solid reinforced concrete. B-52, B-1B, B-2 spirit and F-15E strike eagle can carry this one.
GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) can penetrate through 200 feet underground before exploding. Some sources indicated that it is designed to penetrate as much as (60 meters) 200 feet of 5000 psi reinforced concrete and 8 meters of 10000 psi reinforced concrete. 13500kg (30000lb) bomb is designed to be carried by only B-2 and B-52.
Another item is B-61 nuke bunker buster.
Underground Concrete Bunkers and on the other hand “ultra long range SAM + highly capable strike fighter force”? Which is better and strategically more useful?
The best defense against the modern massive air raid is to possess efficient and sophisticated ULRSAM for outer layer defense to effectively shoot down enemy’s AWACS, C4ISTAR aircrafts, long range bombers, strike fighters, and conventional warhead or WMD tipped SRBM & MRBM outside the own territory; and for the inner layer to shoot down cruise missiles, stand-off weapons and PGMs by Mobile Point Defense Weapon Systems like Tor and Pantsir.
Meanwhile, preventive and preemptive defensive measures will be more reliable to deal with any symmetric or asymmetric WMD threats, widely spread out global radicalism and the threat of terror whether they come fromastate or non state actors or state backed non state actors.
After the cold war, with the breakdown of strong nation states, international or transnational non state actors emerged asaprime source of major security threats in the international arena.
Offensive is the best defense. Bunker spirit is the defeatists’ mentality.
Every sovereign nation on earth has its own right to defend its national interest.
Any potential blood thirsty radical non state actors or provocative war drumming interventionists must be utterly devastated in the blood sea in case of any intrusion to our country.
Burma needs suchacapability. Burma must prepare to dissolve the potential multi spectrum security threats for the coming decades.
Burma’s leaders need to understand that military strength is not foracheap propaganda to control the political power asamean to exploit the nation’s wealth for their very personal private benefits.
hla min October 6, 2014 at 11:58 AM
Feel very sorry for hearing MDW circles had very serious pressures and hardships. But it postedalot after suffering many problems.
Deeply appreciate the bloggers for posting about nation's military capabilities though MDW is an unofficial and private blog.
Aung Kyaw Khine May 29, 2015 at 3:19 AM
Just tried http://clanshelper.com/ - I got free CoC gems here! Get yous too in less than two minutes!! It rocks!!(F3tBwmTbDr)
U lay aung February 20, 2016 at 12:46 AM
မိုက်တယ် ၊ ဥမင်လှိုင်ခေါင်း စဆရ က မဖြစ်မနေ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ် ။